I-Luxury Relax ku-Loft-Style ku-Eiffel Apartment
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Istvan
U-Istvan Ungumbungazi ovelele
Gxumela emabhayisikilini ukuze uhambe ekuseni libalele eduze nomfula i-Danube, bese ungena kubhavu oshelelayo, osendlini yokugezela ukuze uthobe imilenze ekhathele. Lesi sikhala esigcwele ukukhanya sihlanganisa usilingi okhuphukayo nezitini eziveziwe ze-rustic kanye nokuhlobisa okuhlanzekile, okumhlophe.
Imizuzu eyi-10 kuphela ukuya ePhalamende naseBasilica
Ngohambo olufushane nje oluya:
- Chain Bridge (imizuzu eyi-10 ukuhamba)
- Umgwaqo we-Váci (uhambo lwamaminithi angu-15)
- I-Danube kuphela ekupheleni komgwaqo
Isakhiwo sibekwe eceleni esakhiweni esidala esilungisiwe, khona kanye enkabeni yedolobha futhi eduze kolayini we-metro kanye ne-tram 4-6.
I-Apartment iwuhambo lwemizuzu eyi-15 ukusuka kumgwaqo wabahamba ngezinyawo i-Vaci utca enkabeni yeBudapest kanye nokuhamba imizuzu eyi-10 ukusuka eChain Bridge kanye nomfula iDuna. I-Wi-Fi yamahhala nebhayisikili yamahhala iyatholakala.
Itholakala enkabeni ye-zone 5. endaweni efunwa yimfashini, ebukekayo nephephile. Itholakala eduze kwesiteshi sesitimela saseWest futhi uhamba imizuzu eyi-10 kuphela ukusuka eChain Bridge nasemfuleni iDuna.
Le yi-En-Suite ezimele enomnyango wangasese nokhiye bayo ngaphakathi kwendlu enkulu. Iyimfihlo ngokuphelele futhi awabelani ngesikhala sakho nanoma ubani. Inegumbi lokugezela eliwubukhazikhazi, ifriji neketela lokwenza iziphuzo ezishisayo.
* Okusha, okuhlanzekile, kwesimanje okunegumbi lokugezela eliyimfihlo eliwubukhazikhazi
* Umbhede wenkosi enkulu onethezeke kakhulu
* Ishawa elinamandla elinamanzi ashisayo angenamkhawulo
* Umshini wokuwasha nge-dryer
* Ukukhanya ngefasitela elikhulu nokubukwa okuhle
* Iphansi eliphansi nokufinyelela kalula
*Izindawo zokwenza itiye/ikhofi kanye nesiqandisi esincane
* Isakhiwo esiphephe kakhulu nesivikelekile
* Wonke amalineni namathawula anikeziwe
*Izinto zokugeza zinikeziwe (izicubu nensipho)
* I-WiFi yamahhala
*I-TV, isomisi sezinwele
* Izitolo eziningi, amathilomu, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela ezizungeze
* Indawo enhle futhi eduze kwazo zonke ezokuthutha
I-En-Suite iyimfihlo ngokuphelele futhi izimele ngokungena kwayo nokhiye nendawo yokugezela yangasese. Kuyisisekelo sesimanje esihlangene futhi esinethezekile esihlanzekile endlini yangasese futhi ilungele abahambi abafuna umbhede onethezekile, ishawa elihle kanye nokulala okuhle kwekhwalithi njengoba igumbi linokuthula kakhulu. Kuyinketho ekahle yezivakashi kusabelomali ezingafuni ukuchitha imali eningi kakhulu endaweni yokuhlala e-Budapest endaweni enhle nephephile. I-En-Suite iphansi phansi ngaphakathi kwendlu enkulu. Ilula futhi isanda kwakhiwa ngokufakwa kwekhwalithi ephezulu, ishawa esezingeni eliphezulu yesimanje kanye neWC. Igumbi linombhede we-king size onethezekile, i-TV ye-freeview egcwele kanye ne-chanel eminingi ye-englisch movie eyakhelwe ngaphakathi (HBO). Ifriji nayo isekhishini. Igedlela, izinkomishi nezingilazi kukhona futhi ukwenza isiphuzo esishisayo noma esibandayo. Kuhlinzekwa amathawula agoqiwe kanye nezingubo zokulala.
Indawo yasendaweni iphephile futhi inothile enezindlu ezibizayo ezizungeze, izitolo ezincane kanye nezindawo zobumnandi. I-Central Budapest iyimizuzu eyi-15 ngokuhamba ngezinyawo.
I-inventory kanye nalokho okutholayo
Ngaphandle kwencazelo yohlu nezithombe ezingezansi imininingwane yezinto ongazilindela efulethini:
2 x idube
2 x imicamelo
Amashidi ahlanzekile futhi agoqwe kanye nezingubo zokulala kukho konke okungenhla
2 x ukuphonswa kombhede wenkosi / isembozo embhedeni wenkosi
1 x ithawula lokugeza umuntu ngamunye
1 x ibhavu/ umata weshawa
umatilasi nemicamelo yokuvikela yonke impahla yokulala enikeziwe
1 x umshini wokomisa izinwele
izicubu zangasese lapho ufika kuphela
bin liner/isikhwama sikadoti lapho ufika kuphela
insipho yesandla ekufikeni kuphela
Sihlinzeka ngesomisi sezinwele
I-Wifi, I-Air Condotioned, Amabhayisikili Amahhala, iMac , Iphephile, umshini wokuwasha, isomisi
Iseduze kakhulu nayo yonke into: i-metro, ibhasi, isitimela, ithilamu kanye neSikhungo Sokuthenga.
I-HDTV engu-42" ene- I-HBO Max, ikhebula ye-premium
UIstvan Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: MA19017233